Onye Kraịst Ò Kwesịrị Iji Ọgwụ Gbochie Afọ Ime? | Ajụjụ Gbasara Baịbụl
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikongo Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Jizọs agwaghị ndị na-eso ụzọ ya mụọ ụmụ ma ọ bụ amụla ụmụ. O nweghịkwa onye na-eso ụzọ Jizọs nyere ụdị iwu ahụ. O nweghị ebe Baịbụl kwuru hoo haa na igbochi afọ ime bụ ihe ọjọọ. Ihe onye ọ bụla kwesịrị iburu n’obi n’okwu a bụ ihe e dere ná Ndị Rom 14:12. Ebe ahụ sị: “ Onye ọ bụla n’ime anyị ga-aza Chineke ajụjụ maka onwe ya. ”
Ọ bụ di na nwunye ga-ekpebi ma hà ga-amụ ụmụ ma ọ bụ na ha agaghị amụ. Ọ bụkwa hanwa ga-ekpebi ụmụ ole ha ga-amụ na mgbe ha ga-amụ ha. Ọ bụrụ na di na nwunye ekpebie iji ọgwụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ gbochie afọ ime, o nweghị onye kwesịrị ịkatọ ha. Ya na ite ime abụghị otu.—Ndị Rom 14:4, 10-13.
Baịbụl Ò Kwuru na Ite Ime Dị Njọ?